Instagram Video Editor: Sida loo Edit Instagram Video
> Resource > Video > Sida loo Edit Instagram Video
Iyada oo loo yaqaan mid ka mid ah goobaha la wadaago sawirka ugu caansan internet-ka, Instagram ayaa ballaarisey adeegyadii ay u waxaa ka mid ah inaad koombiyuutarka, tafatirka iyo dhajinta video sidoo. Instagram kuu ogolaanayaa inaad boostada ilaa iyo 15 ilbiriqsi ah ee video, taas oo ka badan laba jeer inta sida canabka.
Intaa waxaa dheer, in aad xaalkaa kartaa video sidoo isticmaalaya barnaamijka fudud in Instagram waxay bixisaa. Haddii aad ku fikirayso uploading iyo sixiddiisa video ah in Instagram, halkan waa tallaabooyinka aasaasiga ah ee geedi socodka.
Basic Video ayeey la Instagram
Tafatirka nidaamka Instagram ah video waa mid sahlan. All aad runtii u baahan tahay inaad samayso waa leeyihiin video ee qalabka si ay u bilaabaan.
Open Instagram App: Marka aad furto app, riix Video astaanta dhanka midig. Tani dhigeysa qalabka aad ku jirto in hab video.
Video: By cadaadinaya oo hoos u haysta button video ah, aad ilaa loading video aad toogtay. Inta aad kaliya haysato 15 ilbiriqsi, waxaad ku kala qaybin karaa ilaa galay clips.
Record: By cadaadinaya oo haysta button video ah si ay u qoraan, oo aad u sii daayo kartaa marka aad rabto in aad joojiso duubo. Taas macnaheedu waa in aad gali kartaa clips ka mid ah video ilaa aad gaarto xadka labaad 15.
Delete: Ma jirtaa clip ah in aadan rabin? Markaas waxaad saari karaan clip ugu dambeeyey in aad uploaded. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa saxaafadeed "X" calaamad in uu yahay dhinaca bidix ee button video ah. Marka uu calaamad u jirsado galay qashinka ah, riixi kartaa in oo clip ugu dambeeyey aad uploaded baabi'i doontaa.
Isticmaal Filter ah: Iyadoo clips aad leedahay, waxaad codsan kartaa filter ka duwan adigoo riixaya ah "Next" button in xaq sare. Waxaa idin tusin clip video ee hab filter doortay.
Xasilinta Image: Waxaa jira ah "on" iyo biiro "off" u feature xasilinta oo ah qaab camera icon ah. By default, waxa uu u soo jeestay oo ku saabsan oo codsatay in aad video. Haddii aadan waxba sameyn, waxaa loo isticmaali doonaa. Si aad u bedesho in, riix icon yar camera muuqata kor ku xusan diirada oo ka hooseeya aad video.
Ku dar Cover Picture: Marka aad dhamaysato uploading clips aad iyo aad dooranayso filter ah, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa ay doortaan cover sawir ka looxyada aad video.
Advanced ayeey si Instagram Videos
Kaliya Waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah video tafatirka aasaasiga ah gudahood app Instagram ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad gacanta badan oo dheeraad ah sida aad video isku dubbarida, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Video Editor . Waa qalab tafatirka fudud weli awood badan oo aad ku siinayaa fursado fog oo dheeraad ah si aad xaalkaa video clip. Waxa aad dhakhso u samayn karaa itusi la fog doorasho badan ka heli dhab ahaan waxa aad rabto.
Waxaa Download hadda iyo raac tallaabooyinka hoose si aad xaalkaa aad Instagram videos si fudud oo dhaqso.
1. Import videos barnaamijka
Riix ah "Import" button ama si toos ah jiidi aad video in album User ee this awood badan Instagram video editor. Markaas jiidi oo hoos ka album in ay Timeline ah.
2. Iska yaree, dalagga, kala ama isku shaandheyn Instagram video
Iyadoo Instagram kaliya waxay bixisaa qaar ka mid ah fursadaha tafatirka ee aasaasiga ah, waana idin Suuraynay kartaa footage si fudud oo dhaqso isticmaalaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Waxaad edit karaa xaq ugu dhaadheceen in la jir ah oo ku saabsan waqtiga: kaliya xaq guji video bartilmaameedka iyo dooran shaqo aad u baahan tahay.
3. Ku dar filtarrada iyo saamaynta kale
Waxaad dooran kartaa ka naqshadeynta badan oo kala duwan, kala guurka, codad, iyo filtarrada, taas oo macnaheedu yahay waxaad ka heli kartaa muuqaal saxa ah iyo ka dhawaajiyaan aad rabto. Si tan loo sameeyo, ka tago si kasta tabs saamayn kor ku xusan jadwalka iyo jiididda-n-hoos u saamayn aad u jeclaan lahaa in aad dalbato.
4. Save iyo wadaagno video
Marka video clip waa diyaar, kaliya badbaadin si haboon qalab mobile ka dibna u geliyaan in ay Instagram oo ha u ciyaaro dunida! Ka sokow in, waxa kale oo aad ku gubi karaa ururinta DVD ah haddii aad u baahan tahay.
Video Tutorial: Sida loo Edit Video la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Sida loo Laablaab Videos
Sida loo soo biir Videos
Sida loo yarey Video
Sida loo beddel Video Aragti Saamiga
Sida loo sameeyo Video ah Picture-in-sawir
Sidee ku cadaadisaa Video Files
Sida loo yareeyo awoodda Video